DeltaFosB ၏ Overexpression ကြွက်တွေမှာ saccharin စားသုံးမှု၏ attenuation ကင်းသွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ (2009) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ပြုမူနေ neuroscience ။ 2009 ဧပြီ; 123 (2): 397-407 ။
Freet CS, Steffen ကို C, Nestler EJ, Grigson ဆာ။
ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံ, ဆေးပညာ, Hershey, PA ဆိုပြီး 17033, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ Pennsylvania ပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များ၏ဦးစီးဌာန။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ကအလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူတွဲသောအခါကြွက် (saccharin ၏စားသုံးမှုဖိနှိပ်Goudie, Dickins, & Thornton, 1978; Risinger & Boyce, 2002) ။ စာရေးသူ '' အကောင့်အသုံးပြုပုံဆုလာဘ်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်ဤဖြစ်စဉ်, (ထိုမူးယစ်ဆေး၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများ၏မျှော်လင့်ကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်PS Grigson, 1997; PS Grigson & CS Freet, 2000) ။ အလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ဆုလာဘ်များနှင့်စွဲလမ်း၏အာရုံကြောအခြေခံနှင့် ပတ်သက်. ရှာဖွေတွေ့ရှိခံရဖို့မရှိသေးပါသော်လည်းΔFosB၏ overexpression မူးယစ်ဆေးထိခိုက်စေမက်လုံးပေးတစ်ခုတိုးနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းလူသိများသည်။ ဒီပေးစာရေးသူΔFosB၏ overexpression လည်းသဘာဝဆုလာဘ်ပိုမိုမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်တန်ဖိုးထောကျပံ့ပေးသင့်ကြောင်းနှီးနှောလေ၏။ ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့, NSE-tTA × TetOp-ΔFosBကြွက် (ချန် et al ။ , 1998) သာမန်တွေနဲ့ဒါမှမဟုတ် striatum အတွက်ΔFosB overexpressed တစ် saccharin cue မှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးထားပြီးတော့ဆားနှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ 10 / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း, ဒါမှမဟုတ် 20 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း MG ။ မူလခန့်မှန်းဆန့်ကျင်, ΔFosB၏ overexpression saccharin စားသုံးမှု၏ attenuation ကင်း-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာΔFosB၏မြင့်အဖြစ်ကောင်းစွာမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးကိုတန်ဖိုးကိုပေမယ် saccharin cue ၏အကျိုးကိုတန်ဖိုးကိုတိုးပွါးမသာကြောင်းတွေးဆသည်။
keywords: ဆုလာဘ်နှိုင်းယှဉ်, သဘာဝဆုလာဘ်, Transgene ကြွက်, CTA, စားသုံးမှု
ရေရှည်တွင် neuron plasticity များအတွက်တတ်နိုင်သမျှမော်လီကျူး switch ကိုမူးယစ်ဆေးစွဲလေ့လာအဖြစ်ΔFosB (အာရုံစူးစိုက်မှုများစွာသောသဘောတူညီမှုရရှိထားသည်ဟုကူးယူအချက်များ၏ Fos မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်McClung et al ။ , 2004; Nestler, Barrot, & Self, 2001; Nestler, Kelz, & Chen, 1999) ။ ΔFosB (homodimerize နိုင်ပါတယ်Jorissen et al ။ , 2007) သို့မဟုတ် JunD (နှင့်အငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိ, JunB နှင့်အတူ heterodimerize; Hiroi et al ။ , 1998; Perez-Otano, Mandelzys, & Morgan, 1998) Active ပရိုတိန်း-1 ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းရန် (ချန် et al ။ , 1995; Curran & Franza, 1988; Nestler et al ။ , 2001) ။ Active ပရိုတိန်း-1, ထို့နောက်အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောမျိုးဗီဇ၏ကူးယူမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်တားစီးဖို့ Active ပရိုတိန်း-1 သဘောတူညီမှုဆိုဒ် (TGAC / GTCA) မှာချည်နှောင်ပေမယ့်ကန့်သတ်ဘဲ, dynorphin, အ AMPA အချိုမှု receptor subunit GluR2, cyclin-မှီခို kinase5နှင့်နျူကလီးယားအချက် Kappa B က (Chen, Kelz, Hope, Nakabeppu, & Nestler, 1997; Dobrazanski et al ။ , 1991; Nakabeppu & Nathans, 1991; ယန်း, ဉာဏ်ပညာ, Tratner, & Verma, 1991) ။ နျူကလီးယပ် accumbens ခုနှစ်, ΔFosB၏မြင့် (dynorphin ၏ကူးယူဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်McClung et al ။ , 2004ဒါပေမယ့်ကြည့်ရှု Andersson, Westin, & Cenci, 2003) ဒါပေမယ့် GluR2 ၏ကူးယူအားပေးအားမြှောက် (Kelz & Nestler, 2000), cyclin-မှီခို kinase5(McClung & Nestler, 2003), နှင့်နျူကလီးယားအချက် Kappa B က (အန်း et al ။ , 2001) ။ ထိုအမျိုးဗီဇ (နှင့် / သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်) ၏အများသောကိုင်တွယ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှ sensitivity ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရန်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဗိုင်းရပ်စ်-mediated ဗီဇကြွက်များတွင်လွှဲပြောင်း, ဒါမှမဟုတ်ကြွက်များတွင်κ-receptor ရန်မဟုတ်သလို-BNI အားဖြင့် dynorphin ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကို အသုံးပြု. GluR2 ၏ overexpression, (အသီးသီးကိုကင်းနှင့်အမော်ဖင်းအကိုက်၏အကြိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးပွားစေKelz et al ။ , 1999; Zachary et al ။ , 2006).
အချက်များတစ်အရေအတွက်ကဦးနှောက်ထဲမှာΔFosBခြီးမွှောနိုငျသညျ, နှင့်မြင့်တိကျတဲ့ဒေသရှိနိုင်ပါသည်။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု, antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးအပေါငျးတို့သ dorsal (caudate-putamen) တွင်ΔFosBခြီးမွှောနှင့် ventral striatum (Atkins et al ။ , 1999; Perrotti et al ။ , 2004, 2008) ။ အဆိုပါ ventral striatum (ဆိုလိုသည်မှာနျူကလိယ accumbens) ခုနှစ်တွင်, သို့သော်ဤအချက်များအသီးအသီး differential တိကျတဲ့ဆဲလ်အမျိုးအစားများအတွက်ΔFosB elevates ။ ဥပမာအားဖြင့်, နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု (ထို ventral striatum အတွက်အလတ်စား spiny dopamine အာရုံခံ၏ dynorphin + / ပစ္စည်းဥစ္စာ P ကို ​​+ နှင့် enkephalin + များအနက်အချို့သာလျှင်အတွက်ΔFosB elevatesPerrotti et al ။ , 2004) ။ Antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများကို (ventral striatum အတွက် enkephalin + dopamine အာရုံခံအတွက်ΔFosBခြီးမွှောAtkins et al ။ , 1999; ဟီရို & Graybiel, 1996), နှင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကို (ventral striatum အတွက် dynorphin + / ပစ္စည်းဥစ္စာ P ကို ​​+ dopamine အာရုံခံအတွက်ΔFosBခြီးမွှောMoratalla, Elibol, Vallejo, & Graybiel, 1996; Nye, မျှော်လင့်ချက်, Kelz, Iadarola, & Nestler, 1995; Perrotti et al ။ , 2008) ။ ထိုသို့စကားရပ်၏ဤပုံစံကြောင့်၎င်းသည် dorsal striatum နှင့် dynorphin + / ပစ္စည်းဥစ္စာ P ကို ​​+ dopamine အာရုံခံငါတို့သည် (မဟုတ်ရင်မှတ်ချက်ချမဟုတ်လျှင်) ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ "striatal" စကားရပ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသောနျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosBစကားရပ်၏ဤအဆုံးစွန်သောပုံစံဖြစ်ပါသည် (သဘာဝဆုလာဘ်, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်စွဲမှအများဆုံးသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါသည်Colby, Whisler, Steffen, Nestler, & Self, 2003; McClung et al ။ , 2004; Olausson et al ။ , 2006; Werme et al ။ , 2002), နှင့်ကလေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုတဲ့ Transgene ကြွက်တွေမှာတွေ့ရှိစကားရပ်၏ဤပုံစံဖြစ်ပါတယ် (Kelz et al ။ , 1999).
စိတ်ဝင်စားစရာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ΔFosB၏မြင့် (နာတာရှည်ထက်စူးရှသောထိတွေ့မှုလိုအပ်ပါတယ်McClung et al ။ , 2004; Nye et al ။ , 1995; ငြိမ်း & Nestler, 1996) ။ ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှစူးရှသောထိတွေ့မှုလျှင်မြန်စွာထိုကဲ့သို့သောက c-Fos နှင့် FosB (အဖြစ် striatum အများအပြား Fos မိသားစုပရိုတိန်း, တိုးပွါးသော်လည်းDaunais & McGinty, 1994; ခမျှော်လင့်ချက်, Kosofsky, Hyman, & Nestler, 1992; Persico, Schindler, O'Hara, Brannock, & Uhl, 1993; Sheng & Greenberg, 1990), ΔFosBသာဟာအလွန်သေးငယ်တဲ့တိုး (ရှိNestler, 2001a; Nestler et al ။ , 1999) ။ သို့သော်တစ်ကြိမ်တည်းထုတ်လုပ်ပြီး, ΔFosB (အခြား Fos ပရိုတိန်းအဘို့အတော်လေးတည်ငြိမ်သည်နှင့် 1-10 နာရီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 12 အပတ်ကထက်ပိုတစ်ခုအတွက် Vivo ဝက်ဘဝကိုရှိပါတယ်ချန် et al ။ , 1997) ။ ဤသည်တည်ငြိမ်မှုကိုမူးယစ်ဆေးမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုနှင့်အတူΔFosB၏နှေးကွေးသောစုဆောင်းခြင်းများအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်အခြား Fos ပရိုတိန်း, (အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတစ်ဦး desensitized တုံ့ပြန်မှုကိုသရုပ်ပြet al မျှော်လင့်ပါတယ်။ , 1992, 1994; Moratalla et al ။ , 1996; Nye et al ။ , 1995) ။ နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုဖြစ်လျှင်, ΔFosBကမျိုးဗီဇစကားရပ်ကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်အပြုအမူသက်ဆိုင်ရာဖြစ်လာနိုင်သည့်မှာအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ΔFosB၏မြင့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရိပ်မိဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုတိုးပွါးကြောင်းသရုပ်ပြစာပေ၏ကြီးထွားလာသောခန္ဓာကိုယ်ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Conditions ရာအရပျ preference ကိုတို့ကလုပ်ပါတယ်မူးယစ်ဆက်စပ်နေရာများ, များအတွက် preference ကိုကို (striatum အတွက်မြင့်မားသောΔFosBနှင့်အတူကြွက်တွေမှာတိုးလာနေသည်Kelz et al ။ , 1999) ။ သိမ်းယူမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ယူပြီးအပြုအမူများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဖြစ်မူးယစ်ဆေးရဖို့လှုံ့ဆျောမှု, အလားတူ (မြင့်မားသောΔFosBနှင့်အတူကြွက်တွေမှာတိုးလာနေကြတယ်Colby et al ။ , 2003) ။ တိုးတက်မှုမူးယစ်ဆေးစွဲ၏မြောက်မြားစွာရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ΔFosBများ၏သက်ရောက်မှုကိုနားလည်ထားထားပြီးဖြစ်သော်လည်း, စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေတဧရိယာမှာသဘာဝဆုလာဘ်၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်တန်ဖိုးအပေါ်ΔFosB၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်။ လူသားတွေအတွက်, ဒီဖြစ်စဉ်ဥပမာ (အလုပ်, မိတ်ဆွေများ, မိသားစုနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအမြတ်အဘို့အလျှော့လှုံ့ဆျောမှု၌ထင်ရှား၏, စတိန်း et al ။ , 2006, 2008; ဂျုံးစ်, ကဲစယ်လ် & Zhang က, 1995; Nair et al ။ , 1997; Santolaria-ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။ , 1995).
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ (လူသားတွေအတွက်စွဲလမ်း၏ဤကြီးကျယ်သောအကျိုးဆက်အကျိုးကိုနှိုင်းယှဉ်ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးကြွက်များတွင်လုပ်ပါတယ်နိုင်အကြံပြုGrigson & Twining, 2002) ။ ဒီပါရာဒိုင်းများတွင်တစ်ခုမဟုတ်ရင်အရေးပါတယ်လို့ saccharin cue မှဝင်ရောက်ခွင့်ထိုကဲ့သို့သောမော်ဖင်းအကိုက်သို့မဟုတ်ကင်းအဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးမှဝင်ရောက်ခွင့်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင်, ကြွက်နှင့်ကြွက် (မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အုပ်ချုပ်ရေးမျှော်လင့်အတွက်အရသာ cue ၏စားသုံးမှုကိုရှောင်ရှားဖို့လာGrigson, 1997; Grigson & Twining, 2002; Risinger & Boyce, 2002) ။ အကျိုးကိုနှိုင်းယှဉ်အယူအဆအရ, သဘာဝဆုလာဘ် cue ၏စားသုံးမှုမှာအနည်းဆုံးကနဦး (ကြည့်မြင်အလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ချိတ်တွဲပြီးနောက်ရှောင်ရှားနေသည် ဝီ et al ။ , 2008), အ gustatory လှုံ့ဆော်မှုများ၏တန်ဖိုး (မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အစွမ်းထက်ကြိုးဂုဏ်သတ္တိများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် pales ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့Grigson, 1997) ။ ဤအမြင်ကို၏အကောင့်အချက်အလက်သည်, ထိုအမြင်ကဆန္ဒရှိမူးယစ်ဆေးဂုဏ်သတ္တိများ (ခန့်မှန်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြွက်အရသာ cue ၏စားသုံးမှုကိုရှောင်ကြဉ်သောအကြံပြုချက်အနေဖြင့်မတူသည့်နှစ်ရှည်လများအေးစက်အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက် (CTA) မှမတူNachman, မျ့ဘဲလျ, & Le Magnen, 1970; Riley & Tuck, 1985).
အကျိုးကိုနှိုင်းယှဉ်ယူဆချက်မှန်ကန်လျှင်, မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်များရိပ်မိတန်ဖိုးကိုကြီးထွားများပြားစေသည်ဟုမဆိုအခြေအနေသို့မဟုတ်အခြေအနေမျိုးတညျးဟူသော saccharin cue ၏ရှောင်ရှားတိုးပွားသငျ့သညျ။ အညီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအထိခိုက်မခံ Lewis ကကြွက်များလျော့နည်းထိခိုက်မခံတဲ့ Fischer ကြွက် (ပြုပါထက် saccharin-ကင်းဒဿနိကဗေဒပြီးနောက် saccharin cue ပိုမိုရှောင်ရှားပြGrigson & Freet, 2000) ။ Sprague-Dawley ကြွက်လည်းနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှု (တစ်သမိုင်းပြီးနောက်ကင်းသို့မဟုတ် sucrose နှင့်အတူတွဲနေတဲ့အရသာ cue ပိုမိုရှောင်ရှားပြGrigson, ဝီ, ဝီ & Ballard, 2001) ။ စိတ်ဝင်စားစရာနာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှုတစ်ခုသမိုင်းနှင့်အတူမူးယစ်ဆေး-ရင်တော့မှားမယ် Lewis ကကြွက်များနှင့် Sprague-Dawley ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးကို (နျူကလိယ accumbens အတွက်ΔFosBခြီးမွှောကျပါပြီHaile, Hiroi, Nestler, & Kosten, 2001; ငြိမ်း & Nestler, 1996) ။ စမ်းသပ်မှု 1 ပိုပြီးတိုက်ရိုက် striatum ၌ဤကူးယူအချက် overexpress ကြောင်းကြွက်များတွင် saccharin cue ၏စားသုံးမှု၏ကင်း-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် conditional လှုံ့ဆော်မှု (CS) စားသုံးမှု၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုအတွက်ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍကိုကို examine ။
ယခင်လေ့လာမှုများကြွက်များတွင်တွေ့မြင်ကြောင်းဆင်တူတဲ့ထုံးစံ (ထဲမှာအလွဲသုံးစားမှုတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူတွဲသည့်အခါကြွက်တစ်အရသာ cue ၏စားသုံးမှုဖိနှိပ်ကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီRisinger & Boyce, 2002; Schroy, 2006) ။ အများကြီးကြွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုများကဲ့သို့ဤလေ့လာမှု CS (အဖြစ်ရေကန့်သတ် access ကိုနှင့်ဦးစားပေး 0.15% saccharin ဖြေရှင်းချက်ကိုအသုံးပြုBachmanov, Tordoff, & Beauchamp, 2001; Tordoff & Bachmanov, 2003) ။ အဆိုပါ saccharin မှဝင်ရောက်ခွင့် (DBA / 10 ကြွက်တွေအတွက်) ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း / MG သို့မဟုတ်2DBA / 20 နှင့် C2BL / 57 ကြွက်တွေမှာ (/ ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း MG6၏ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သောအခါထိုအစမ်းသပ်ချက်များတွင်တစ်ဦး saccharin cue ၏စားသုံးမှုနှိမ်နင်းခဲ့သည် ) ကင်း (Risinger & Boyce, 2002; Schroy, 2006) ။ ဆားနှင့်အတူတွဲသည့်အခါထိုကွောငျ့, စမ်းသပ်မှု 1 တစ် 0.15% saccharin cue ၏စားသုံးမှု၏ဖိနှိပ်မှုအကဲဖြတ်, 10 / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း, ဒါမှမဟုတ် 20 mg ရေ-ဆုံးရှုံး NSE-tTA × TetOp-ΔFosBလိုင်းတစ်ဦးကကြွက်များတွင် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း MG ။ ဤရွေ့ကားအရွယ်ရောက်ပြီးသူ Transgene ကြွက် (SJL × C57BL /6နောက်ခံ) (ရေမှ doxycycline ၏ဖယ်ရှားရေးအပေါ် striatum အတွက်ΔFosB၏ရွေးချယ် overexpression သရုပ်ပြချန် et al ။ , 1998) ။ ကြွက်များတွင်ရရှိသောအချက်အလက်များ၏အခြေခံပေါ်မှာကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုတိုးပွားခြင်းနှင့်အားဖြင့်ΔFosBပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုဖို့ saccharin cue ဆွေမျိုးများ၏စားသုံးမှု၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့မယ်လို့သည်ဤကြွက်များတွင်ΔFosB၏မြင့်တွေးဆ။
အဆိုပါဘာသာရပ်များ 60 အထီး NSE-tTA × TetOp-ΔFosBလိုင်းတစ်ဦးက bitransgenic ကြွက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကြွက်တက္ကဆက်ပြည်နယ် Dallas တက္ကသိုလ်မှတက္ကဆက်ပြည်နယ်၏အနောက်တောင်ပိုင်း Medical Center မှာမှာတိရိစ္ဆာန်စက်ရုံအားဖြင့်ထုတ်ပေးလျက်, သောက်ရေအတွက် ml ကို 100 μg doxycycline / ရက်နေ့တွင်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်ရ Transgene ΔFosBစကားရပ်နှင့်ပြည့်ဝ၏ဖိနှိပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအားဖြင့်သာမန်ဖွံ့ဖြိုးရေး (အဘို့ခွင့်ပြု ချန် et al ။ , 1998) ။ အဆိုပါကြွက်ထို့နောက် (အားလုံးကြွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်း and Quarantine စဉ်အတွင်း doxycycline အပေါ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်) Hershey, Pennsylvania ပြည်နယ်ဆေးပညာ၏ Pennsylvania ပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်မှာတိရိစ္ဆာန်စက်ရုံမှတင်ပို့နှင့်2လကြာ quarantined ခဲ့ကြသည်။ quarantine ကနေဖြန့်ချိခြင်း, ကြွက်၏ထက်ဝက် (တွင်n = (30) doxycycline ဖယ်ရှားခဲ့ခြင်းနှင့်ΔFosB overexpression စမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ 8 ပတ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခံခဲ့ရပါတယ်, အချိန်ကိုလုပျသငျΔFosBအရေးယူဘို့လိုအပ်McClung & Nestler, 2003) ။ ကြွက်၏ကျန် (n = 30) ကိုလေ့လာချက်များ၏ကြာချိန်များအတွက် doxycycline အပေါ်နျြရစျ။ ကြွက်စမ်းသပ်မှုရဲ့အစမှာ 31.2 g နဲ့ 45.0 ဂရမ်အကြားချိန်နှင့်စံအတွက်တစ်ဦးချင်းသျောခဲ့ကြသည်တစ် 21-နာရီ Light-မှောင်မိုက်သံသရာနှင့်အတူအပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားသော (12 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုစက်ရုံအတွက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပလပ်စတစ်ဒယ်အိုးအိတ်များ (အပေါ်ထွန်း7နံနက်): 00 မှာ။ သံသရာ၏အလင်းကိုအဆင့်သို့: နှင့်2နာရီ (9 ညနေ 00): အားလုံးစမ်းသပ်ထိန်းသိမ်းရေး7နာရီ (2 နံနက် 00) ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကြွက်မဟုတ်ရင်မှတ်ချက်ချဘယ်မှာ မှလွဲ. Harlan Teklad ကြွက်အစားအစာ (W) 8604 နှင့်ရေခန်းခြောက်အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်နှင့်အတူထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။
အားလုံးစမ်းသပ်ထိန်းသိမ်းရေးအိမ်လှောင်အိမ်ထဲမှာကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ Mohr pipettes DH များကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်ဘွဲ့ရအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်2အိုနှင့် saccharin access ကို။ Pipettes အဆိုပါ tapered ကြီးစွန်းဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ဖန်ဆလင်ဒါကူးပြောင်းခဲ့ကြသည်။ ဗဟိုမှတဆင့်ဖြည့်စွက်တဲ့သံမဏိမျိုးတွင်နှင့်အတူတစ်ဦးကရော်ဘာအဆို့ထို့နောက်ဆလင်ဒါ၏အောက်ခြေ၌ထားများနှင့်အလားတူရော်ဘာအဆို့ (အနုတ်အဆိုပါမျိုးတွင်) အဆလင်ဒါ၏ထိပ်ကိုတံဆိပ်ခတ်ခဲ့သည်။ DH ၏စားသုံးမှု2အိုနှင့် saccharin 1 / 10 ml တှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့သည်။
အားလုံးဘာသာရပ်များလေ့လာမှုတစ်လျှောက်လုံးတစ်နေ့တစ်ကြိမ်အလေးချိန်ခဲ့ကြသည်။ quarantine ကနေဖြန့်ချိပြီးနောက်နှင့်ဖော်ပြထားသည်ΔFosB overexpression ကြွက် (အဖြစ်n = 30) 100 μg / ml doxycycline ၏ချွတ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဤကြွက်စစ် DH လက်ခံရရှိ2လေ့လာမှု၏ကျန်ရှိသောအဘို့အိုနှင့်ကြွက်များ၏အခြားတစ်ဝက် (n = 30), အΔFosBပုံမှန်အုပ်စုများ doxycycline အပေါ်ဆက်ပြောသည်။ ΔFosB overexpression ၏ 8 ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်, အခြေခံရေစားသုံးမှုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ အခြေခံတိုင်းတာသည်, အားလုံးကြွက် DH မှဝင်ရောက်ခွင့်ပါဝင်သည်တဲ့ရေဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အချိန်ဇယားအပေါ်ထားရှိခဲ့ကြသည်2အို (ကုသမှုအုပ်စုကိုပေါ် မူတည်. နှင့်အတူသို့မဟုတ် doxycycline မပါဘဲ) 1 နာရီများအတွက်9မှာစတင်: 00 နံနက်နှင့်2မှာစတင်2နာရီများအတွက်: 00 ညနေအခြေခံစားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 1 တစ်ပတ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ စမ်းသပ်ခြင်းစဉ်အတွင်းအားလုံးကြွက် (ဆားတစ်ဦး intraperitoneal ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ချက်ချင်းနောက်တော်သို့လိုက်နံနက်ယံ၌ 1% saccharin မှ 0.15 နာရီ access ကိုလက်ခံရရှိn = 10 / ဆဲလ်), 10 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း (n = 10 / ဆဲလ်), သို့မဟုတ် 20 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း (n = 10 / ဆဲလ်) ။ အရသာမူးယစ်ဆေးဝါးဒဿနိကဗေဒငါးခုစမ်းသပ်မှုတွေသည် 48 နာရီဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, ရှိသမျှဘာသာရပ်များ DH မှ2နာရီ access ကိုလက်ခံရရှိ2အိုသို့မဟုတ် 100 μg / ml doxycycline တစ်ဦးချင်းစီနေ့လည်ခင်းနှင့် DH မှ 1 နာရီ access ကို2အုပ်စုတစ်စုတာဝန်ကျတဲ့နေရာကသတ်မှတ်အိုသို့မဟုတ် 100 μg / ml, အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေအကြားတစ်ဦးချင်းစီနံနက် doxycycline ။ Saccharin အဆိုပါ Sigma ဓာတုကုမ္ပဏီ, စိန့်လူးဝစ်, MO ကိုနှင့်ကိုကင်း HCl မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျုအားဖြင့်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်မှရရှိသောခဲ့သည်။ အဆိုပါ saccharin ဖြေရှင်းချက်အခန်းအပူချိန်မှာတင်ဆက်ခဲ့သည်။
စားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် (ΔFosB၏ overexpression vs. ပုံမှန်) ကုသမှုအမျိုးမျိုးကှဲလှဲ၏2×3×5ရောထွေး factorial ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (ANOVAs) သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်, မူးယစ် (ဆား, 10 / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း, ဒါမှမဟုတ် 20 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း mg), နှင့် စမ်းသပ်မှုတွေ (1-5) ။ ဘယ်မှာသင့်လျော်သော Post ကို hoc စမ်းသပ်မှု .05 တစ်ခု alpha နှင့်အတူ Neuman-Keuls စမ်းသပ်မှုသုံးပြီး, ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ၏လေ့လာရေး ပုံ 1 အဆိုပါ striatum အတွက်ΔFosB၏ overexpression တစ်လျှော့ချရေးထက် saccharin cue ၏စားသုံးမှု၏ကင်း-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုတစ်ခုတိုးပွားနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသထားတယ်။
ဆား၏ intraperitoneal ဆေးထိုးနှင့်အတူငါးဒဿနိကဗေဒအောက်ပါ 1% saccharin ၏ (± SEM) စားသုံးမှု (ml / 0.15 နာရီ) ကိုဆိုလိုတာ, 10 / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း mg, ဒါမှမဟုတ် 20 နှင့်အတူ NSE-tTA × TetOp-ΔFosBလိုင်းအတွက် / တစ်ဦးကကြွက်ကီလိုဂရမ်ကိုကင်း MG သာမန် (panel ကို left) သို့မဟုတ်မြင့်မားသော ...
ဒီလေ့လာရေးများအတွက်ပံ့ပိုးမှုစမ်းသပ်မှုအပြန်အလှန်×မူးယစ်ဆေး×သိသိသာသာကုသမှု၏ post ကို hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးခဲ့ပါသည်, F(8, 212) = 2.08, p <.04 ။ အထူးသဖြင့် Newman-Keuls post-hoc စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကကိုကင်းသည် 10 mg / kg ဆေးပမာဏသည်ကုသမှုအုပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင် CS စားသုံးမှုကိုလျှော့ချရာတွင်ထိရောက်မှုမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။p > .05), 20 mg / kg ဆေးထိုးΔFosB၏မြင့်မားသောစကားရပ်နှင့်အတူကြွက်များတွင်လျော့နည်းထိရောက်သောခဲ့သည် ပုံ 1ညာဘက် panel က) ။ အဆိုပါ 20 နှင့်အတူကုသမှု / သိသိသာသာစမ်းသပ်မှု 2-5 အပေါ်အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဆားကုသထိန်းချုပ်မှုဖို့ saccharin cue ဆွေမျိုးများ၏စားသုံးမှုလျှော့ချကင်းကီလိုဂရမ်ထိုး MG ပေမယ့်ဒါက (ဖြစ်ပါသည်ps <.05), osFosB ၏မြင့်မားသောစကားရပ်နှင့်အတူကြွက်ပုံမှန်ဖော်ပြထိန်းချုပ်မှုလုပ်ခဲ့တယ်ထက် 20 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းနှင့်အတူတွဲခဲ့ saccharin cue ၏သိသိသာသာပိုမိုစားသုံးကြ၏။ ဤအမူအကျင့်သည်စမ်းသပ်မှု ၃-၅ တွင်သိသာထင်ရှားသည် ( ps <.05) ။
အဆိုပါ striatum မဟုတ်သလိုမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုသိသိသာသာပြောင်းလဲခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ΔFosBမ overexpression ။ ဒါကနိဂုံးချုပ်ကုသမှုတစ်ခု nonsignificant အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကထောက်ခံခဲ့သည်, F <1, ဒါမှမဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါး, F(2, 53) = 1.07, p = .35 ။ စမ်းသပ်မှုတွေ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုသိသာကြီး F(5, 265) = 10.54, p <.0001, အဆက်မပြတ်စမ်းသပ်မှုကျော်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းလဲသွားတယ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ၂ × ၃ × ၆ ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ထားသော ANOVA သည်သိသာသောကုသမှု×မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စမ်းသပ်မှုများအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ F(10, 265) = 4.35, p <.01, post-hoc စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုမှတ်သားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။
DH ၏နံနက်စားသုံးမှု2အို (ml / ဇ) အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေ (အခြေခံ, စမ်းသပ်မှု W1-W4) အကြားရက်ထဲမှာတင်ပြထားပါသည် ပုံ2(ထိပ် left နှင့်ညာဘက်ပြား) ။
DH ၏ဆိုလို (± SEM) စားသုံးမှု2နံနက်ယံ၌အို (ml / 1 နာရီ; ထိပ်တန်းပြား) နှင့်နေ့လယ် (ml /2နာရီ; အောက်ခြေပြား) NSE-tTA × TetOp-ΔFosBလိုင်းအတွက်သာမန် (လက်ဝဲပြား) သို့မဟုတ်ခြီးမွှောကျ (ညာပြား) နဲ့တစ်ဦးကြွက်ΔFosB၏အဆင့်ဆင့် အဆိုပါ striatum အတွက် ...
တစ်ဦးက2×3×5ရောထွေး factorial ANOVA အဆိုပါ striatum မဟုတ်သလိုမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုအတွက်ΔFosBမ overexpression သိသိသာသာနံနက် DH ပြောင်းလဲကြောင်းထင်ရှား2အိုစားသုံးမှုမူးယစ်ဆေး×စမ်းသပ်မှုအပြန်အလှန်×တစ် nonsignificant ကုသမှုအားဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ် (F <1) ။ ထို့အပြင်ကုသမှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုမ, F <1, ဒါမှမဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါး, F(2, 53) = 2.55, p = .09, မမူးယစ်ဆေးအပြန်အလှန်×အဆိုပါကုသမှု, F(8, 212) = 1.57, p = .14, ကစာရင်းအင်းသိသာခဲ့ပါတယ်။
DH ၏စားသုံးမှု2အားလုံးစမ်းသပ်မှုတွေများအတွက်နေ့လည်ခင်းများတွင် 2-နာရီ access ကိုကာလအဘို့အိုထဲမှာတင်ပြထားပါသည် ပုံ2(အောက်ခြေ left နှင့်ညာဘက်ပြား) ။ ကုသမှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (သိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့F <1) osFosB ၏အလွန်အကျွံထုတ်ဖော်မှုသည်နေ့လည်ခင်း dH ကိုမသက်ရောက်ကြောင်းအကြံပြုသည်2ခြုံငုံအိုစားသုံးမှု။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု, သို့သော်, စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုမှီပြု F(2, 53) = 7.95, p <.001, ကုသမှု×မူးယစ်ဆေး×စမ်းသပ်မှုများအပြန်အလှန်ပြုသကဲ့သို့, F(18, 477) = 2.12, p <.005 ဒီသုံးပွင့်ဆိုင် ANOVA ကို hoc စစ်ဆေးမှုများသည်နေ့လည်ခင်း dH ကိုဖော်ပြခဲ့သည်2အဆိုပါ 10 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ကိုကင်းအုပ်စုများအတွက်အိုစားသုံးမှုသိသိသာသာကို (ဆားထိန်းချုပ်မှု၏ကှာခွားဘူးps> .05) ။ သို့သော်နေ့လည်ခင်း dH2အိုစားသုံးမှုသိသိသာသာသူတို့ရဲ့ဆားထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ် / ကီလိုဂရမ်အုပ်စုများ mg, ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကြွက်ကြွက်များတွင်နံနက် (ဆိုလိုသည်မှာစမ်းသပ်မှု 20,3နှင့်4အတွက် saccharin cue စားသုံးမှုကိုရှောင်ရှားခဲ့သောအတွက်အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်သိသာထင်ရှားသောခဲ့5အတွက်တိုးပွားလာခဲ့သည် ပုံမှန်ΔFosBနှင့်မြင့်မားသောΔFosBနှင့်အတူကြွက်တွေမှာစမ်းသပ်မှု4နှင့်5အတူ ps <.05) ။
စမ်းသပ်မှု 1 အတွက်ရရှိသောရလဒ်များသည်ယခင်ကထုတ်ဝေအချက်အလက်များ၏အခြေခံပေါ်မှာဟောကိန်းထုတ်သောသူတို့ကိုဆနျ့ကငျြဘဖြစ်ကြသည်။ ΔFosB၏မြင့်မားသောစကားရပ်နှင့်အတူကြွက်တွေအစားအထပ်ထပ် saccharin-ကင်းဒဿနိကဗေဒအောက်ပါတစ် saccharin cue ပိုမို, ရှောင်ရှားခြင်းထက်, ပြောင်ပြ။ ဤအဒေတာအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းလင်းချက်၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ ယင်းစာပေပေးထား, အများဆုံးသိသာဒီပါရာဒိုင်းဆန္ဒရှိထက်ကြိုး, မူးယစ်ဆေးဂုဏ်သတ္တိများ (မှအထိခိုက်မခံကြောင်းဖြစ်ပါသည်Nachman et al ။ , 1970; Riley Tuck, 1985) ။ ဓာတ်လှေကားΔFosBဖြစ်လျှင်, အကြိုးမူးယစ်ဆေးဂုဏ်သတ္တိများမှတုန့်ပြန်တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါမသာပေမယ့်အဖြစ်ကောင်းစွာဆန္ဒရှိမူးယစ်ဆေးဂုဏ်သတ္တိများမှတုန့်ပြန်လျော့စေနိုင်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်မှန်ကန်လျှင်, မြင့်မားသောΔFosBနှင့်အတူကြွက်တွေလည်းမျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါΔFosB၏ပုံမှန်စကားရပ်နှင့်အတူကြွက်တွေထက်သေးငယ် LiCl-သွေးဆောင် CTAs ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့, တူညီတဲ့ကြွက်သူတို့တစ်တွေဝတ္ထု 1 M က NaCl ဖြေရှင်းချက်မှ 0.1 နာရီ access ကိုလက်ခံရရှိသည့်စံအေးစက်အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါရာဒိုင်းအတွက် run ခဲ့ကြသည်နှင့်အ, ချက်ချင်းအဲဒီနောက်, 0.018 M က LiCl, ဆားနှင့်အတူ intraperitoneally ထိုးသွင်းခြင်းသို့မဟုတ် 0.036 M က LiCl ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါဘာသာရပ်များ 58 (29 ΔFosBနှင့် 29 ပုံမှန်ΔFosB overexpressed) အထီး NSE-tTA × TetOp-ΔFosBလိုင်းစမ်းသပ်မှု 1 များတွင်အသုံးပြုတစ်ဦးကကြွက်များရှိကြ၏။ ကြွက်အညီအမျှယင်းအုပ်စုများအကြားကြိုတင် saccharin-ဆားသို့မဟုတ် saccharin-ကင်းအတွေ့အကြုံကိုဖြန့်ဝေဖို့ counterbalanced ခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်ခြင်း၏ထိုအချိန်တွင်စမ်းသပ်အုပ်စုတွင်ကြွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 17 ရက်သတ္တပတ်များအတွက် striatum အတွက်ΔFosB၏ overexpression ခဲ့အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ကြွက်စမ်းသပ်မှုရဲ့အစမှာ 31.7 နှင့် 50.2 အကြားချိန်တွယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့သူတို့တစ်ဦးချင်းစီသျောနှင့်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
အဆိုပါယန္တရားကြောင်းဖော်ပြထားစမ်းသပ်မှု 1 ကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်ခဲ့သည်။
အားလုံးဘာသာရပ်များလေ့လာမှုတစ်လျှောက်လုံးတစ်နေ့တစ်ကြိမ်အလေးချိန်ခဲ့ကြသည်။ အခြေခံတိုင်းတာသည်, အားလုံးကြွက်အုပ်စုတစ်စုတာဝန်ကျတဲ့နှုန်းအဖြစ်နှင့်အတူသို့မဟုတ် doxycycline မပါဘဲ, (1 နာရီနံနက်နှင့်2ညနေ) အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောရေဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အချိန်ဇယားအပေါ်ထားရှိခဲ့ကြသည်။ base line ကိုစားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် 1 တစ်ပတ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ စမ်းသပ်ခြင်းစဉ်အတွင်းအားလုံးကြွက် (ဆားတစ်ဦး intraperitoneal ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ချက်ချင်းနောက်တော်သို့လိုက်နံနက်ယံ၌ 1 M က NaCl မှ 0.1 နာရီ access ကိုလက်ခံရရှိn =9/ ဆဲလ်), 0.018 M က LiCl (n = 10 / ဆဲလ်), သို့မဟုတ် 0.036 M က LiCl (n = 10 / ဆဲလ်) ။ ကြွက်များတွင် LiCl တစ် 0.009 M ကထိုး၏ဖိနှိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု (ကိုကင်းများ၏ 10 mg / kg ဆေးထိုး၏ရန်ကိုက်ညီလျက်ရှိသည်Grigson, 1997) ။ သို့သျောလညျး, (စမ်းသပ်မှု 1 အတွက်ကြွက်များ၏ကြိုတင်အတွေ့အကြုံကိုပေးသောနှင့်သက်သေအထောက်အထားထိုကဲ့သို့သောကြိုတင်အတွေ့အကြုံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှောင့်နှေးခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်တစ်နောက်ဆက်တွဲ CS-ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု၏စကားရပ် (ယူအက်စ်) အသင်းအဖွဲ့နိုငျကွောငျးဖေါ်ပြခြင်းကြိုး et al ။ , 2005), ကျနော်တို့) LiCl (0.018 M နှင့် 0.036 M က၏အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားဆေးများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အရသာမူးယစ်ဆေးဝါးဒဿနိကဗေဒငါးခုစမ်းသပ်မှုတွေသည် 48 နာရီဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အားလုံးဘာသာရပ်များ DH မှ2နာရီ access ကိုလက်ခံရရှိ2အိုသို့မဟုတ် 100 μg / ml doxycycline တစ်ဦးချင်းစီနေ့လည်ခင်းနှင့် DH မှ 1 နာရီ access ကို2အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေအကြားအိုသို့မဟုတ် 100 μg / ml doxycycline တစ်ခုချင်းစီကိုနံနက်။ NaCl Fisher ကဓာတု, Pittsburgh, PA မှရရှိသောခဲ့သည်; LiCl အဆိုပါ Sigma ဓာတုကုမ္ပဏီ, စိန့်လူးဝစ်, MO ကိုမှရရှိသောခဲ့သည်။ အဆိုပါ NaCl ဖြေရှင်းချက်အခန်းအပူချိန်မှာတင်ဆက်ခဲ့သည်။
စားသုံးမှုတစ်2×3×5ရောထွေး factorial ANOVA အမျိုးမျိုးကုသမှု (ΔFosB၏ overexpression vs. ပုံမှန်), မူးယစ် (ဆား, 0.018 M က LiCl, ဒါမှမဟုတ် 0.036 M က LiCl), နှင့်စမ်းသပ်မှုတွေ (1-5) သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဘယ်မှာသင့်လျော်သော Post ကို hoc စမ်းသပ်မှု .05 တစ်ခု alpha နှင့်အတူ Neuman-Keuls စမ်းသပ်မှုသုံးပြီး, ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ LiCl CTA သင်ယူမှုအပေါ်ΔFosB၏ overexpression ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာပြသ ပုံ 3.
သာမန် (လက်ဝဲ panel ကိုနှင့်အတူဆား၏ intraperitoneal ဆေးထိုး, 1 M က LiCl နှင့်အတူငါးဒဿနိကဗေဒပြီးနောက် 0.1 M က NaCl ၏ဆိုလို (± SEM) စားသုံးမှု (ml / 0.018 နာရီ), ဒါမှမဟုတ် NSE-tTA × TetOp-ΔFosBလိုင်းအတွက် 0.036 M က LiCl တစ်ဦးကကြွက်များ ) သို့မဟုတ်မြင့်မားသော (ညာ panel က) ...
အဆိုပါ ANOVA ၏ရလဒ်များကိုစမ်းသပ်မှုအပြန်အလှန်×သိသိသာသာမူးယစ်ဆေးထင်ရှား, F(8, 204) = 5.08, p <.001, ကြွက်အားလုံး, မခွဲခြားဘဲ osFosB စကားရပ်၏, ဆား - ကုသဘာသာရပ်များမှရောဂါ - သွေးဆောင်အေးဂျင့် LiCl နှင့်အတူတွဲခဲ့သော NaCl CS ၏စားသုံးမှုကိုရှောင်ကြဉ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောကိုကင်းအချက်အလက်နှင့်မတူဘဲသုံးဖက်မြင် ANOVA သည်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအရေးပါမှုကိုမချဉ်းကပ်ပါ (F <1) ။ ထို့အပြင်ကုသမှု၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ doxy သို့မဟုတ်ရေ)၊ F <1), ကုသမှု×စမ်းသပ်မှုအပြန်အလှန် (F <1) သို့မဟုတ်ကုသမှု×မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု (F <1) ။ ဒါတောင်မှမှာပြထားတဲ့အချက်အလက်များ၏လေ့လာရေး ပုံ3LiCl ၏ဖိနှိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု, ကိုကင်းကဲ့သို့, အ overexpressing ΔFosBကြွက်တွေမှာသေးငယ်ပါပြီစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့သီးခြားစီမူးယစ်ဆေးနှင့်စမ်းသပ်မှုတွေအမျိုးမျိုး3×5ရောထွေး factorial ANOVAs အသုံးပြု. ကုသမှုအုပ်စုများ reanalyzed ။ ဤအ ANOVAs ၏ရလဒ်များကို, ပုံမှန်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအသိသိသာသာမူးယစ်ဆေး×စမ်းသပ်မှုအပြန်အလှန်အတည်ပြုခဲ့သည် F(8, 100) = 3.48, p <.001 နှင့်အလွန်အကျွံဖိအားပေး, F(8, 108) = 2.19, p <.033, osFosB ကြွက်များ။ Post hoc စစ်ဆေးမှုများသည်ပုံမှန်ကြွက်များအတွက်စမ်းသပ်မှု ၃–၅ တွင် LiCl ပမာဏပိုမိုမြင့်မားသောပမာဏဖြင့် CS စားသုံးမှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ကြောင်းနှင့်အလွန်အမင်းဖိနှိပ်သည့်ကြွက်များအတွက်စမ်းသပ်မှု ၃ နှင့် ၄ တွင် (ps <.05) ။
တစ်ဦးအတော်လေးမြင့်မားတဲ့နမူနာအရွယ်အစားနေသော်လည်း, LiCl data တွေကိုစမ်းသပ်မှု 1 အတွက်ကင်းဒေတာခဲ့ကြသည်ထက်ပို variable ကိုဖြစ်ကြသည်။ မှာပြထားတဲ့အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ ပုံ3ဖြစ်နိုင်ဖွယ်စမ်းသပ်မှု 1 အတွက်ဆားသို့မဟုတ်ကင်းကုသမှု၏သမိုင်းမှပြောပြတယ်။ ဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့အားထုတ်မှုအဖြစ်ကျနော်တို့သမိုင်း (ကိုကင်း vs. ဆား), ကုသမှု (ΔFosB၏ overexpression vs. ပုံမှန်), မူးယစ် (ဆား,2ကွဲပြားတဲ့2×3×5× 0.018 ရောထွေး factorial ANOVA သုံးပြီး LiCl CTA ဒေတာ reanalyzed M က LiCl, ဒါမှမဟုတ် 0.036 M က LiCl), နှင့်စမ်းသပ်မှုတွေ (1-5) ။ အဆိုပါ 10 / ကီလိုဂရမ်နှင့် 20 mg / kg ဆေးထိုးကင်း mg နှင့်အတူရိုးရှင်းများ၏ဘို့အလိုငှါ, ကိုကင်းသမိုင်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုသမိုင်းနှင့်အတူကြွက်တွေကနေအချက်အလက်များ၏ပျမ်းမျှရောင်ပြန်ဟပ်။ ကနဦးဆန်းစစ်၏ရလဒ်များကိုဆင်တူ, လေးခု-လမ်းအပြန်အလှန်ကိုလည်းစာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုမှီရန်ပျက်ကွက်, F(8, 180) = 1.34, p = .22 ။ ထို့နောက် saccharin-ဆားသို့မဟုတ် saccharin-ကင်းစွမ်းတစ်ဦးကသမိုင်း, ဖွယ်ရှိဒေတာအတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲစေတယ်, ဒါပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုယူနီဖောင်းမရှိ, သမိုင်းအချက်များ၏ပါဝင်သည့် LiCl- ၏ပြင်းအားအတွက်ကစာရင်းအင်းသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုထုတ်ဖော်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမဟုတျပါဘူး ΔFosBတစ်ခု overexpression နှင့်အတူပုံမှန်ΔFosBကြွက်နှင့်ကြွက်အကြား CTA သွေးဆောင်။ ပေါင်းလဒ်ခုနှစ်, LiCl အဆိုပါ NaCl CS ၏စားသုံးမှုဖိနှိပ်, နှင့် overexpressing ΔFosBကြွက်တွေမှာအနည်းငယ်လျော့နည်းသွားအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်စိတ်သဘောထားရှိပေမယ့်, ဆေးကုသမှုအုပ်စုများအကြားခြားနားချက်စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုချဉ်းကပ်ဘဲနေ၏။
အတူတူယူစမ်းသပ်မှု 1 နှင့်2ကနေရလဒ်တွေကိုမွငျ့မားΔFosBနှင့်အတူကြွက်တွေ saccharin-ကင်းဒဿနိကဗေဒပြီးနောက် sac charin CS ၏သိသိသာသာပိုပြီးလောင်ခြင်းနှင့် NaCl-LiCl ဒဿနိကဗေဒပြီးနောက် NaCl CS ပိုမိုစားသုံးလေ့ဖော်ပြသည်။ ΔFosB၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်နဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့လူသိများကြောင့် (အထူးသဖြင့်စမ်းသပ်မှု 1 မှာ) မူးယစ်ဆက်စပ် CSS ပိုမိုစားသုံးဖို့စိတ်သဘောထားဟာ saccharin နှင့် / သို့မဟုတ် NaCl CS ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများမှ sensitivity ကိုတစ်ခုတိုးလာ၏ရလဒ်ဖြစ်မည်အကြောင်း ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာလုံးလေးများအဖြစ်တခြားသဘာဝဆုလာဘ်မှတုန့်ပြန်တစ်ခုတိုး (Olausson et al ။ , 2006) နှင့်ဘီးပြေး (Werme et al ။ 2002) ။ ΔFosB၏မြင့်မားသော striatal အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူဤအကြွက်တွေကိုရေနှင့်နှစ်ပုလင်းစားသုံးမှုစမ်းသပ်မှုအတွက် sucrose နဲ့ဆားပါဝင်မှုများတဲ့အကွာအဝေး၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများကိုပိုမိုကိုအလွန်ကိုတုံ့ပြန်ရှိမရှိ3စမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်။
စမ်းသပ်မှု3စမ်းသပ်မှု 1 အတွက် overexpressing ΔFosBကြွက်တို့က CS စားသုံးမှု၏လျှော့ချဖိနှိပ်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေး, ဒါပေမယ့်သဘာဝ saccharin ဆုလာဘ် cue မသာ၏ရိပ်မိဆုလာဘ်တန်ဖိုးတိုးပွား၏ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်သောအယူအဆဆနျးစစျဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ ဒီအယူအဆအကဲဖြတ်ဖို့, ကျွန်တော်တစ်ဦးကြိုး (sucrose) လှုံ့ဆော်မှုများစားသုံးမှုအပေါ်ΔFosB၏ overexpression ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ one- အသုံးပြု Two-ပုလင်းစားသုံးမှုစမ်းသပ်မှု။ ထို့အပြင်ဤကြွက်စမ်းသပ်မှု2အတွက် NaCl-LiCl ဒဿနိကဗေဒပြီးနောက် NaCl CS overconsume ဖို့အတှကျစိတျသဘောထားပေးထားကျနော်တို့ကိုလည်း၏ပြင်းအားတစ်အကွာအဝေး၏စားသုံးမှုအပေါ်မြင့်မားသောΔFosB၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့တဦးတည်းနှင့် Two-ပုလင်းစားသုံးမှုစမ်းသပ်မှုအသုံးပြုသော ပိုပြီး "ကြားနေ" NaCl ဖြေရှင်းနည်းများ။ NaCl (0.03 M က, 0.1 M ကများနှင့် 0.3 M က) နှင့် sucrose (0.01 M က, 0.1 M ကများနှင့် 1.0 M က) ၏သုံးပြင်းအားဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာΔFosB၏မြင့်ကသဘာဝဆုလာဘ်၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုကြီးထွားများပြားစေလျှင်ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါက, sucrose ၏စားသုံးမှုစမ်းသပ်ကြွက်တွေမှာ သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်သင့်ကြောင်းတွေးဆခဲ့သည်။
အဆိုပါဘာသာရပ်များ 28 (14 ΔFosBနှင့် 14 ပုံမှန်ΔFosB overexpressed) အထီး NSE-tTA × TetOp-ΔFosBလိုင်းစမ်းသပ်မှု 1 များတွင်အသုံးပြုတစ်ဦးကကြွက်များရှိကြ၏။ စမ်းသပ်ခြင်း၏ထိုအချိန်တွင်စမ်းသပ်အုပ်စုတွင်ကြွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 25 ရက်သတ္တပတ်များအတွက် striatum အတွက်ΔFosB၏ overexpression ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကြွက်တစ်ခုမအောင်မြင် anticipatory ဆနျ့ကငျြဘစမ်းသပ်မှုအတွက် saccharin-sucrose ကွန်မြူနစ်ဝါဒ (ကြွက်တွေမှာ anticipatory ဆနျ့ကငျြဘကိုထောကျပံ့သော parameters တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း) နဲ့ကြိုတင်အတှေ့အကွုံခဲ့သညျ။ ကြွက်စမ်းသပ်မှုရဲ့အစမှာ 31.5 နှင့် 54.5 ဂရမ်အကြားချိန်တွယ်။ သူတို့ကယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့သျောနှင့်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။
အဆိုပါယန္တရားစမ်းသပ်မှု 1 တှငျဖျောပွထားကြောင်းအတိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
အားလုံးဘာသာရပ်များတစ်ချိန်ကနေ့စဉ်အလေးချိန်ခဲ့ကြသည်။4ရက်ကြာလေ့ကာလအတွင်းစီ mouse ကို DH မှ 1 နာရီ access ကိုလက်ခံရရှိ2မွန်းလွဲပိုင်းတွင်အတွက်နံနက်နှင့်2နာရီ access ကိုအို။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှု, မြင့်မားသောΔFosBနှင့်အတူကြွက် (လျှောက်လုံးn = 14) DH လက်ခံရရှိ2တစ်ဦးချင်းစီနေ့လည်ခင်း rehydrate အိုများနှင့်ပုံမှန်ΔFosBနှင့်အတူကြွက် (n = 14) 100 μg / ml doxycycline ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ NaCl (0.03 M က, 0.1 M ကများနှင့် 0.3 M က) နှင့် sucrose (0.01 M က, 0.1 M ကများနှင့် 1.0 M က) ၏သုံးပြင်းအားဟာ tastants အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအာရုံစူးစိုက်မှု 1 ရက်ဆက်တိုက်များအတွက်နံနက် 3-နာရီကာလအတွင်းကြွက်မှတင်ပြခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအ2ရက် tastant တပုလင်းတင်ပြချက်များခဲ့ကြသည်နှင့် 3rd နေ့ tastant နှင့် DH တစ် Two-ပုလင်းတင်ဆက်မှုများပါဝင်သည်2O. အဆိုပါပုလင်းများ၏အနေအထားအုပ်စုများအတွင်းနှင့် Two-ပုလင်းစမ်းသပ်အစည်းအဝေးများတလွှား, လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ counterbalanced ခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြေရှင်းချက်တစ်ခုတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုနိုင်ရန်အတွက်တင်ပြခဲ့ကြသည်နှင့် NaCl ၏စားသုံးမှု sucrose မတိုင်မီစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ နှစျခု DH2အိုသာစမ်းသပ်မှုတွေ NaCl နှင့် sucrose စမ်းသပ်ခြင်းများအကြားကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ စားသုံးမှုအနီးဆုံး 1 / 10 ml ကိုမှနေ့ရက်တိုင်းအပေါ်တိုင်းတာခဲ့သည်။
အဆိုပါဒေတာကိုသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် t .05 တစ်ခု alpha နှင့်အတူစမ်းသပ်မှု။
နှစ်ခု-ပုလင်းစမ်းသပ်မှုများမှဒေတာများ (တွေ့မြင်အများဆုံးသိကောင်းစရာများနှင့်, အရှင်, ဒီမှာတင်ပြကြသည်ခဲ့ကြသည် ပုံ 4) ။ baseline တပုလင်းရေစားသုံးမှုကိုလည်းရည်ညွှန်းတဲ့အချက်အဖြစ်ပြသထားပါသည်။
DH နှိုင်းယှဉ် NaCl ၏ပြင်းအား (ထိပ်ပြား) နှင့် sucrose (အောက်ခြေပြား) ၏အကွာအဝေး၏ (± SEM) စားသုံးမှု (ml / 1 နာရီ) ကိုဆိုလိုတာ2NSE-tTA × TetOp-ΔFosBလိုင်းအိုသာမန် (လက်ဝဲပြား) သို့မဟုတ်ခြီးမွှောကျ (ညာပြား) နဲ့တစ်ဦးကြွက်ΔFosB၏အဆင့်ဆင့် ...
NaCl preference ကို
ယေဘုယျအား LiCl ၏အတော်လေးနိမ့်ဆေးများနှင့်ချိတ်တွဲပြီးနောက် 0.1 M က NaCl ဖြေရှင်းချက်မှလေ့လာသင်ယူ CTA ၏သမိုင်းစားသုံးမှုစမ်းသပ်မှုများတွင်လေ့လာတဲ့အခါမှာ NaCl ၏ပြင်းအားကိုတိုးမြှင့်ဖို့ preference ကို-ခြင်းကိုမနှစ်သက်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုတားဆီးခဲ့ပါဘူး။ ပုံမှန်ΔFosB (ထိပ် left panel က) နဲ့ကြွက်များတွင် NaCl (0.03 M နှင့် 0.1 M က) ၏နှစျခုနိမ့်ဆုံးပြင်းအား၏စားသုံးမှု DH ၏စားသုံးမှုကနေကွဲပြားဘူး2နှစ်ခု-ပုလင်းစမ်းသပ်မှုအို (ps> .05) ။ NaCl (0.3 M) သည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း dH ထက်သိသိသာသာလျော့နည်းသည်2(အိုp <.0001), ဒီအာရုံစူးစိုက်မှု၏ aversive သဘောသဘာဝနှင့်အတူတသမတ်တည်း (Bachmanov, Beauchamp, & Tordoff, 2002) ။ မြင့်မားသောΔFosB (ညာဘက်ထိပ် panel က) နှင့်အတူကြွက်များတွင်အလားတူပုံစံ (NaCl ၏ 0.3 M ကအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူထင်ရှားခဲ့သည်p <.01), osFosB ၏မြင့်သိသိသာသာဒီဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုဖို့တုံ့ပြန်မှုကိုပြောင်းလဲမပြုခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ။ NaCl ၏အနိမ့်ပြင်းအားနှင့်အတူမည်သို့ပင်ဖြစ်စေတစ် ဦး ကကွဲပြားခြားနားသောပုံစံ, ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် osFosB ၏မြင့်မားသောဖော်ပြချက်ကြောင့်ကြွက်များသည် dH နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အောက်နား ၀.၀၃ M နှင့် ၀.၁ မီလီမီတာပြင်းအားကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။2နှစ်ခု-ပုလင်းစမ်းသပ်မှုအို (ps <.03) ။ ထို့နောက် osFosB ၏မြင့်တက်ခြင်းသည်ကြားနေမှ ဦး စားပေးအဆင့်သို့ NaCl ၏အောက်ပိုင်းပါဝင်မှုကို ဦး စားပေးမည်။
သုံးပြီးပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး t မှီခိုနမူနာများအတွက်စမ်းသပ်မှုပုံမှန်ΔFosBနှင့်အတူကြွက်တွေမှာ, sucrose ၏နိမ့်ဆုံးအာရုံစူးစိုက်မှု (0.01 M က) ၏စားသုံးမှု DH ထက်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောမဟုတျကွောငျးဖျောပွခဲ့2(အိုp = .82) ။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, 0.1 M နှင့် 1.0 M က sucrose ပြင်းအားသိသိသာသာ DH မှပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့ကြသည်2(အိုps ကို <.0001) ။ မြင့်မားသော osFosB နှင့်အတူကြွက်များတွင် sucrose သိသိသာသာ dH မှပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့သည်2စမ်းသပ်ပြီးအားလုံးပါဝင်မှုကိုဖြတ်ပြီးအို (ps <.02) ။ ဤတွေ့ရှိချက်သည် osFosB မြင့်တက်ခြင်းသည်သဘာဝဆုလာဘ်များကိုပိုမိုနှစ်သက်စေသည်ဟုကောက်ချက်ချရန်ထောက်ခံမှုပေးသည်။
ဤဆောင်းပါး၌အဆိုပါဒေတာ striatum အတွက်ΔFosB၏မြင့်သရုပ်ပြ saccharin စားသုံးမှု၏ attenuation ကင်း-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ထိုကဲ့သို့သောမြင့်တက်ကိုကင်းများ၏ဖိနှိပ်မှုသက်ရောက်မှုလွယ်ကူချောမွေ့သင့်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလခန့်မှန်းဖို့ကောင်တာကို run ပေးနိုင်ပါတယ်။ အထူးသΔFosB၏မြင့် (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုတိုးပွါးColby et al ။ , 2003; Kelz et al ။ 1999), နှင့်တစ်ဦးစွဲ-ကျရောက်နေတဲ့ phenotype နှင့်အတူသို့မဟုတ်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အတူကုသမှု၏သမိုင်းနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များ (ΔFosB၏မြင့်တက်ထုတ်လုပ်ရန်နှစ်ဦးစလုံး၏) (ထိန်းချုပ်မှုမှ saccharin စားသုံးမှုဆွေမျိုးများ၏ သာ. ကြီးမြတ်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုကိုသရုပ်ပြGrigson & Freet, 2000; Grigson et al ။ , 2001) ။ ဒါဟာယခင်စမ်းသပ်ချက်အတွက်ဘာသာရပ်များသာမကသိမ်းယူΔFosBခြီးမွှောကျကြောင်း, သို့သော်သတိပြုဖို့ကအရေးကြီးတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုဒါမှမဟုတ်စွဲလမ်း-ကျရောက်နေတဲ့ phenotype (ထံမှဖြစ်ပေါ်သောများပြားလှအာရုံခံအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်Nestler, 1995, 2001b; Nestler & Aghajanian, 1997) ။ ဤရွေ့ကားအပိုဆောင်းအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ခြောအပြုအမူမှလှူဒါန်းခဲ့ခြင်းနှင့် CS စားသုံးမှု၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုအတွက်တစ်ဦးလျှင် se, ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍကိုအနက်ကိုဘော်ပြရန်ကြိုးစားနေသည့်အခါတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှရှက်ကြောက်တင်ပြ။ ဤသည်ရှက်ကြောက်သည့်ဖြစ်ရပ်ဆန်းအတွက်ΔFosB၏အခန်းကဏ္ဍကို၏တစ်ဦးထက်ပိုတိုက်ရိုက်အနက်အဘို့အခွင့်ပြုခြင်း, (ဆိုလိုသည်မှာအားလုံးဘာသာရပ်များΔFosBအတွက်ဓာတ်လှေကားချွင်းချက်အားဖြင့်ထိုအတူရှိကြ၏) ထိုစမ်းသပ်ချက်အတွက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလက်ရှိဒေတာ saccharin စားသုံးမှု၏ကင်း-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုမွငျ့မား striatal ΔFosB၏ရှေ့တော်၌တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်, သို့သော်အကျိုးသက်ရောက်မှုထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုး attenuation ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ striatum အတွက်ΔFosB၏မြင့်ဖြစ်လျှင်, saccharin စားသုံးမှု၏ကင်း-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုကိုလျှော့ချထက်မြှင့်တင်ရန်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
မျှမျှတတအလျင်အမြန်ဖယ်ထုတ်လိမ့်နိုငျသော attenuation အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်ΔFosBအတွက်မြင့်တက်ကိုကင်းများ၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုလျော့ကျတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဤသည်ကို (ကျယ်ပြန့်စာပေအလွဲသုံးစားမှုတစ်ခုကိုကင်းများ၏ရိပ်မိဆုလာဘ်တန်ဖိုးတိုးနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများမှမွငျ့မားΔFosBချိတ်ဆက်ပေးထားတစ်ခုမဖြစ်နိုင်ရှင်းပြချက်ပုံရသည်Colby et al ။ , 2003; Kelz et al ။ , 1999; McClung & Nestler, 2003; McClung et al ။ , 2004; Nestler et al ။ , 2001, 1999) ။ ဒုတိယ, ကို attenuation မျိုးစိတ်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ΔFosBများ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ ကြွက်များနှင့်ကြွက်များ CS စားသုံးမှု၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုအလားတူခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုသရုပ်ပြနေသောကြောင့်တဖန်စာပေ (ဒီဖြစ်နိုင်ချေကိုထောကျပံ့မထားဘူးGrigson, 1997; Grigson & Twining, 2002; Risinger & Boyce, 2002ΔFosBအားဖြင့်) နှင့်အမူအကျင့်ာင်း (Kelz et al ။ , 1999; Olausson et al ။ , 2006; Werme et al ။ , 2002; Zachary et al ။ , 2006) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကΔFosB၏မြင့် saccharin စားသုံးမှု၏ကင်း-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှု attenuate မယ်လို့အထွေထွေဝန်ထမ်းတွေရဲ့လိုငွေပြမှုဖန်တီးစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီသဘာဝတရား၏ပြတ်တောက် operating အပြုအမူများ၏သင်ယူမှုသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်တွင်တွေ့မြင်ကြသည်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေလွန်း, (မဖြစ်နိုင်ပုံပေါ်Colby et al ။ , 2003), နှင့် LiCl-သွေးဆောင် CTA ၏ဝယ်ယူစမ်းသပ်မှု2အတွက်ΔFosBစကားရပ်တစ်ခု function ကိုအဖြစ်, သိသိသာသာ, ကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါΔFosB overexpressing ကြွက်လည်း (ထိုမောရစ်ရေဝင်္နှင့် conditional ရာအရပျ preference ကိုအတွက်သာမန်အားဖြင့်ပြုမူKelz et al ။ , 1999).
နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေစမ်းသပ်မှု 1 အတွက်အချက်အလက်များ၏ရိုးရာ CTA အနက်အားဖြင့်ကြီးပြင်းနေပါတယ်။ ဒါက saccharin cue ၏စားသုံးမှု၏ကင်း-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုဆန္ဒရှိမူးယစ်ဆေးဂုဏ်သတ္တိများအားဖြင့်မောင်းထုတ်ခဲ့ကြလျှင်, တဦးတည်းအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်ΔFosBလျှော့ချထိုအခြင်းကိုမနှစ်သက်မူးယစ်ဆေးဂုဏ်သတ္တိများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခြီးမွှောကျကောက်ချက်ချလိုသည်။ တကယ်တော့, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဆန္ဒရှိဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်သောသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ ကိုကင်း (လေယာဉ်ခရီးစဉ်တုံ့ပြန်မှုများကဲ့သို့ထိတ်လန် potentiate ပြထားပြီးBlanchard, Kaawaloa, Hebert, & Blanchard, 1999) နှင့်ခုခံကာကွယ်အပြုအမူတွေ (Blanchard & Blanchard, 1999) ကြွက်တွေမှာ။ ဒါတောင်မှအများဆုံးသက်သေအထောက်အထား (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများကြိုးမူးယစ်ဆေးဂုဏ်သတ္တိများမှတဆင့် CS စားသုံးမှုဖိနှိပ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်Grigson & Twining, 2002; Grigson, လိမ်, Freet, ဝီ, & Geddes, 2008) ။ အဆိုပါ gustatory thalamus ၏ဥပမာအားဖြင့်, တွေ့ရှိရပါသည် (Grigson, Lyuboslavsky, & Tanase, 2000; Reilly & Pritchard, 1996; Scalera, Grigson, & Norgren, 1997; Schroy et al ။ , 2005), gustatory thalamocorticol ကွင်းဆက် (Geddes, Han, & Grigson, 2007) နှင့်နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex (Geddes, Han, Baldwin, Norgren, & Grigson, 2008; Mackey, Keller, & van der Kooy, 1986) အလွဲသုံးစားမှု sucrose နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအသုံးပြုပုံသော်လည်းမ LiCl က saccharin cue ၏ဖိနှိပ်မှုနှောင့်အယှက်။ အလားတူပင်ရွေးချယ်ကြွက်ဗီဇ (အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ် sucrose အမေရိကန်တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးအဘို့ဖြစ်သည်မဟုတ် LiCl အမေရိကန်များအတွက် differential ကိုဖိနှိပ်မှုကိုသရုပ်ပြဂလိုဗာ, Shaw, & Riley, 1994; Grigson & Freet, 2000) ။ အလားတူ dissociations (ဆင်းရဲချို့တဲ့ပြည်နယ်၏ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်အတူသရုပ်ပြခဲ့ကြGrigson, Lyuboslavsky, Tanase, & Wheeler, 1999) နှင့်နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်သမိုင်းနှင့်အတူကြွက်များတွင် (Grigson et al ။ , 2001) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, စမ်းသပ်မှု3နှင့်2အတွက်ΔFosB၏မြင့်အသီးသီးချွင်းချက်မရှိသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုဖို့ conditional တုံ့ပြန်မှုဖြစ်စေမသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်သာမန်ကြွက်မှဆွေမျိုး, မြင့်မားသောΔFosBနှင့်အတူကြွက်တွေစမ်းသပ်မှု 0.3 အတွက်အစွမ်းထက်3M က NaCl ဖြေရှင်းချက်များနှင့်စမ်းသပ်မှု2အတွက် LiCl-ဆက်စပ် CS တစ်ဦးကစာရင်းအင်းအလားတူခြင်းကိုမနှစ်သက်မှအလားတူခြင်းကိုမနှစ်သက်ပြ။
ဒါကသက်သေအထောက်အထားဘေးဖယ်, တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုမှာကျွန်တော်တစ်ဦး saccharin cue ၏စားသုံးမှု၏ကင်း-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှုတစ်အေးစက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပြည်နယ် (စတင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားရယူဝီ et al ။ , 2008) ။ ကျနော်တို့ cue-သွေးဆောင်ဆုတ်ခွာ (ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အသုံးပြုပုံကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၌, ဆန္ဒရှိပြည်နယ်ကမကထပြုခဲ့ကြောင်း hypothesizeGrigson et al ။ , 2008; ဝီ et al ။ , 2008) ။ ဖြစ်နိုင်ချေ, ဖြစ်လျှင်, မူးယစ်ဆေးလျော့နည်း cue-သွေးဆောင်ဆုတ်ခွာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်ကြောင့် striatum အတွက်ΔFosBအတွက်တိုးမူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ် cue နည်းရှောင်ရှားဖို့ဦးဆောင်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်အကြောင်းတည်း။ ဖြစ်နိုင်ပါပေမယ့်, ဒီနိဂုံးချုပ်လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြွက်များတွင်လက်ခံရန်ခက်ခဲပုံရသည်, ထို CS (ဆန္ဒရှိအရသာ reactivity ကိုအပြုအမူတစ်ခုတိုးလာသဖြင့်တိုင်းတာကဲ့သို့) မှပိုပြီးခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါ (မူးယစ်ရန်တုံ့ပြန်မှုသမီးအတွက်တစ်ဦးတိုးနှင့်ဆက်စပ်သည်ဝီ et al ။ , 2008) ။ ရဟန်းတို့ဤသို့လျှင်ဤယုတ္တိဗေဒသုံးပြီးကျနော်တို့မွငျ့မားΔFosBနဲ့ကြွက်ကောက်ချက်ချရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေမည်ဖြစ်ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်အတိုင်း, မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများကိုပိုမိုတုံ့ပြန်မှုများမှာ, ဒါပေမယ့်လည်းလျော့နည်း cue-သွေးဆောင်တဏှာသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းပြ။ ဤသည်မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။
လက်ရှိဒေတာအတွက် attenuation အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုသော heuristic ရှင်းပြချက်ΔFosB၏မြင့်သောဤကြွက်များတွင်ကင်း၏အကြိုးသက်ရောက်မှုတိုးလာပေမယ့်, ကလည်း saccharin များ၏ရိပ်မိကြိုးတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ΔFosBအလားတူ saccharin နှင့်ကိုကင်းများ၏အကြွင်းမဲ့အာဏာဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်လိုလျှင် (ကိုကင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ), saccharin ၏အကျိုးကိုတန်ဖိုးကိုအတွက်ရိပ်မိတိုးလို သာ. ကြီးမြတ် Weber ရဲ့ပညတ်တရားအားဖြင့်ဖော်ပြထားအဖြစ် (ကရိပ်မိပြောင်းလဲမှုဆိုလိုသည်မှာ sensitivity ကိုပြောင်းပြန်အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုများအကြွင်းမဲ့အာဏာတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအပေါ်မူတည် ; Weber, 1846) ။ ဆွေမျိုး CS အာခေါင်များတွင်ထိုသို့သောတစ်ခုတိုး (ထိုဆုလာဘ်အကြားဆွေမျိုးခြားနားချက်လျော့ခြင်းနှင့်အကျိုးကိုနှိုင်းယှဉ်အကျိုးသက်ရောက် attenuate မယ်လို့Flaherty Rowan, 1986; Flaherty, Turovsky, & Krauss, 1994) ။ ဤသည်အနက်ကိုနောက်ထပ်သဘာဝကဆုလာဘ်များအတွက်တုံ့ပြန်ΔFosBတိုး၏မြင့်ဖေါ်ပြခြင်းစာပေကထောက်ခံသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဘီး (runningWerme et al ။ , 2002) နှင့်အစားအစာလုံးလေးများများအတွက်လှုံ့ဆျောမှု (Olausson et al ။ , 2006) နှစ်ဦးစလုံးΔFosB၏မြင့်နှင့်အတူတိုးပွားလာလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, စမ်းသပ်မှု3အတွက်ရရှိသောဒေတာများကိုလည်းΔFosB၏မြင့် sucrose (0.03 M က, 0.1 M ကများနှင့် 0.3 မီတာ) နှင့်ရေနှင့် Two-ပုလင်းစမ်းသပ်မှုအတွက် NaCl (0.01 နှင့် 0.1 M က) ၏အနိမ့်ပြင်းအားအဘို့အ preference ကိုတိုးပွါးဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ဒီစမ်းသပ်မှု၏ရည်မှန်းချက် (အကျိုးကိုနှိုင်းယှဉ်ပါရာဒိုင်းသဘာဝဆုလာဘ်လူ့စွဲ၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်တန်ဖိုးပုံစံထင်တဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမွငျ့မားΔFosB၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်Grigson, 1997, 2000, 2002; Grigson & Twining, 2002; Grigson et al ။ , 2008) ။ စွဲနေတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အပြုအမူ phenotype ရှိပါတယ်, များပြားအချက်များစွဲများ၏အမူအကျင့်စကားရပ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ သို့သော်လက်ရှိစာပေ၏အခြေခံပေါ်မှာ, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်ΔFosB၏မြင့်အဆိုပါအကြိုးသက်ရောက်မှုမူးယစ်ဆေး (၏ထိခိုက်မခံတဲ့အတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပေါ်လာသောColby et al ။ , 2003; Kelz et al ။ , 1999) နှင့်တိုးပွားလာသည့်သဘာဝဆုလာဘ်များအတွက်တုံ့ပြန်အတွက် (Olausson et al ။ , 2006; Werme et al ။ 2002) ။ ဤဆောင်းပါးသည်ဤဆုလာဘ်များအပြန်အလှန်အတွက်ΔFosB၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အလင်းတှရေဲ့အဓိပ်ပာ။ ΔFosB၏မြင့်အဆိုပါ saccharin cue ၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်တန်ဖိုးများအတွက်လိုအပ်သောပေါ်လာပါဘူး။ တကယ်တော့ထိန်းချုပ်မှုကြွက်သင့်လျော်စွာအဆိုပါ saccharin cue ၏စားသုံးမှုနှိမ်နင်း။ အဲဒီအစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာ striatum အတွက်ΔFosB၏မြင့်အလွဲသုံးစားမှုဖြင့်သဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအကြားဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုအတွက်ရိပ်မိကွာခြားချက်လျှော့ချခြင်းဖြင့်ဒီဖြစ်ရပ်ဆန်းဆန့်ကျင်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကအလားအလာကသဘာဝဆုလာဘ်နှင့်အတူတင်ပြသည့်အခါဒါလုပ်နေတယ်, ဒီ phenotype နှင့်အတူကြွက်တွေအမှန်တကယ်မူးယစ်ဆေးဝါးကနေပိုကောင်းတဲ့ကာကွယ်ထားဖြစ်နိုင်သည်။ ထောက်ခံမှုခုနှစ်, saccharin မှဝင်ရောက်ခွင့်ကို (နျူကလိယ Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်မော်ဖင်းအကိုက်၏ကနဦးဆေးထိုးဖို့ dopamine တုံ့ပြန်မှု accumbens bluntsGrigson & Hajnal, 2007) နှင့်တစ်ဦးအရေးပါတယ်လို့ sucrose ဖြေရှင်းချက်မှအကျဉ်းနေ့စဉ်အသုံးပြုခွင့် (အစောပိုင်းဝယ်ယူအတွက်ကင်းများအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ကြွက် '' ဆန္ဒလျော့ကျကြိုး, 2007ΔFosB၏မြင့်အခြားရွေးချယ်စရာဆုလာဘ်၏မရှိခြင်းအတွက်မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေသည့်အပြုအမူမှကြွက်များနှင့်ကြွက်များ predispose နိုင်ပေမယ့်) ထို့ကြောင့်, တကအလားအလာအခြားရွေးချယ်စရာသဘာဝကဆုလာဘ်များမျက်မှောက်၌မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်ကနေဘာသာရပ်ကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။
ဒါဟာသုတေသနပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ရေး DA09815 နှင့် DA024519 ဖွငျ့နှင့် PA ဆိုပြီးပြည်နယ်ဆေးရွက်ကြီးအခြေချရန်ပုံငွေအဖွဲ့ 2006-07 ကထောက်ခံခဲ့သည်။
Andersson က M, Westin je, Cenci MA ။ နာတာရှည် dopaminomimetic ကုသမှုပြတ်တောက်ပြီးနောက် striatal DeltaFosB ကဲ့သို့ immunoreactivity နှင့် prodynorphin mRNA အဆင့်ဆင့်၏အချိန်သင်တန်း။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2003; 17: 661-666 ။ [PubMed]
အန်းအီး, Chen က J ကို, Zagouras P ကို, မဂ္ဂနာ H ကို, ဟော်လန် J ကို, Schaeffer အီး, et al ။ နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens နျူကလီးယားအချက်-kappaB ၏ induction ။ Neurochemistry ၏ဂျာနယ်။ 2001; 79: 221-224 ။ [PubMed]
Atkins JB, Chlan-Fourney J ကို, Nye သူ, Hiroi N ကို, Carlezon WA, Jr က Nestler EJ ။ atypical antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများနှိုင်းယှဉ်ပုံမှန်၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့် deltaFosB ၏ဒေသကြီး-တိကျတဲ့သော induction ။ synapses ။ 1999; 33: 118-128 ။ [PubMed]
Bachmanov AA ကို, Beauchamp GK, Tordoff MG ။2mouse ကိုဗီဇအားဖြင့် NaCl, KCl, CaCl4 နှင့် NH28Cl ဖြေရှင်းချက်၏ဆန္ဒအလျောက်စားသုံးမှု။ အပြုအမူမျိုးရိုးဗီဇ။ 2002; 32: 445-457 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bachmanov AA ကို, Tordoff MG, Beauchamp GK ။ C57BL / 6ByJ နှင့် 129P3 / J ကိုကြွက်များ၏ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ် preference ကို။ ဓာတု Sense ။ 2001; 26: 905-913 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Blanchard, DC, Blanchard RJ ။ ကိုကာကိုင်းသည်ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ ခုခံကာကွယ်သည့်အပြုအမူများကိုပြုလုပ်သည် Neuroscience & Biobehavioral သုံးသပ်ချက်များ။ 1999; 23: 981-991 ။ [PubMed]
Blanchard ဖြစ်ပြီး RJ, Kaawaloa ဖြစ်မှု, Hebert MA, Blanchard ဖြစ်ပြီး DC က။ ကိုကင်း mouse ကိုကာကွယ်ရေးစမ်းသပ်ဘက်ထရီအတွက်ကြွက်တွေမှာထိတ်လန့်ကဲ့သို့ပျံသန်းတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်သည်။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1999; 64: 523-528 ။ [PubMed]
Chen က J ကို, Kelz ကို MB, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Nakabeppu Y ကို, Nestler EJ ။ နာတာရှည် Fos-related antigen: နာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင် deltaFosB ၏တည်ငြိမ်သောမျိုးကွဲ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1997; 17: 4933-4941 ။ [PubMed]
Chen က J ကို, Kelz ကို MB, Zeng, G, Sakai က N ကို, Steffen ကို C, Shockett PE, et al ။ ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင်, ပစ်မှတ်ထားဗီဇစကားရပ်နှင့်အတူ Transgene တိရိစ္ဆာန်များ။ မော်လီကျူးဆေးဝါးဗေဒ။ 1998; 54: 495-503 ။ [PubMed]
Chen က J ကို, et al Nye သူ, Kelz ကို MB, Hiroi N ကို, Nakabeppu Y ကို, မျှော်လင့်ခြင်း BT ။ electroconvulsive ဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်ကင်းကုသနေဖြင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB နှင့် FosB တူသောပရိုတိန်း၏စည်းမျဉ်း။ မော်လီကျူးဆေးဝါးဗေဒ။ 1995; 48: 880-889 ။ [PubMed]
Colby CR, Whisler K ကို Steffen ကို C, Nestler EJ, ကိုယ်ပိုင် DW ။ DeltaFosB ၏ Striatal ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ overexpression ကင်းဘို့မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2003; 23: 2488-2493 ။ [PubMed]
Curran T က, Franza BR, Jr Fos နှင့်ဇွန်လ: ။ အဆိုပါ AP-1 ကွန်နက်ရှင်။ cell ။ 1988; 55: 395-397 ။ [PubMed]
Daunais JB, McGinty JF ။ acute နှင့်နာတာရှည်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေး differential striatal opioid နှင့်နျူကလီးယားကူးယူအချက် mRNAs ပွောငျးလဲ။ synapses ။ 1994; 18: 35-45 ။ [PubMed]
Dobrazanski P ကို, Noguchi T က, Kovary K ကို Rizzo, CA, Lazo PS, Bravo R. အဆိုပါ fosB ဗီဇနှစ်ယောက်စလုံးထုတ်ကုန် FosB နှင့်၎င်း၏အတိုပုံစံ FosB / SF, fibroblasts အတွက်မှတ်တမ်း Active ဖြစ်ကြသည်။ မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာဇီဝဗေဒ။ 1991; 11: 5470-5478 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Flaherty CF, Rowan GA ။ saccharin ဖြေရှင်းချက်၏စားသုံးမှုအတွက်အဆက်ဆက်တစ်ပြိုင်နက်နှင့် anticipatory ဆနျ့ကငျြဘ။ စမ်းသပ်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်: တိရိစ္ဆာန်အပြုအမူလုပ်ငန်းစဉ်။ 1986; 12: 381-393 ။ [PubMed]
Flaherty CF, Turovsky J, Krauss KL ။ ဆွေမျိုး hedonic တန်ဖိုးကို anticipatory ဆနျ့ကငျြဘ modulates ။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 1994; 55: 1047-1054 ။ [PubMed]
Geddes RI က, ဟန် L ကို, Baldwin AE, Norgren R ကို, Grigson ဆာ။ Gustatory နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပေမယ့်မပေး lithium chloride တို့-သွေးဆောင်, Conditions လှုံ့ဆော်မှုစားသုံးမှု၏ဖိနှိပ်မှုနှောင့်အယှက်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2008; 122: 1038-1050 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Geddes RI က, ဟန် L ကို, Grigson ဆာ။ သဘာဝ saccharin ဆုလာဘ် cue ၏ gustatory thalamocorticol ကွင်းဆက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်တန်ဖိုး၏တွေ့ရှိရပါသည်, နဂိုအတိုင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်တုံ့ပြန်ဆာထွက်ခွာနေစဉ်။ အစာစားချင်စိတ်။ 2007; 49: 292-311 ။
Glowa JR, Shaw က AE, Riley AL ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင်အေးစက်အရသာဆန္ဒရှိ: LEW / N နှင့် F344 / N ကိုကြွက်ဗီဇအတွက်သက်ရောက်မှုများအကြားနှိုင်းယှဉ်။ Psychopharmacology (ဘာလင်) 1994; 114: 229-232 ။ [PubMed]
စတိန်း RZ, ဝါဂွမ်း LA က, Jia Z ကို, Maloney T က, Volkow ND, Squires NK ။ ငယ်ရွယ်ကျန်းမာတဲ့လူကြီးများအတွက်သိမြင်မှုဖြစ်ရပ်-related အလားအလာများနှင့်အမူအကျင့်အပေါ်အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောငွေကြေးဆုလာဘ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychophysiology အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။ 2006; 62: 272-279 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စတိန်း RZ, Parvaz MA, Maloney T က, Alia-Klein et al N ကို, Woicik PA ဆိုပြီး, Telang က F ။ လက်ရှိကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်ငွေကြေးဆုလာဘ်မှစိတ်မချရသော sensitivity ကို: တစ်ခုက ERP လေ့လာမှု။ Psychophysiology ။ 2008; 45: 705-713 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Goudie AJ, Dickins DW, Thornton EW ။ ကြွက်များတွင်ကင်း-သွေးဆောင်အေးစက်အရသာဆန္ဒရှိ။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1978; 8: 757-761 ။ [PubMed]
Grigson ဆာ။ အလွဲသုံးစားမှုအေးစက်အရသာဆန္ဒရှိနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ: တစ်ဦးကအဓိပ္ပာယ်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1997; 111: 129-136 ။ [PubMed]
Grigson ဆာ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆုလာဘ်နှိုင်းယှဉ်၏မူးယစ်ဆေးဝါး: တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ အစာစားချင်စိတ်။ 2000; 35: 89-91 ။ [PubMed]
Grigson PS ချောကလက်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့: ဘုံယန္တရားများအားဖြင့် modulated သီးခြားဆုလာဘ်? ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 2002; 76: 389-395 ။ [PubMed]
Grigson PS, Freet CS ။ အဆိုပါဖိနှိပ် sucrose နှင့်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုများ, ဒါပေမယ့်မရ lithium chloride တို့, Fischer ကြွက်များထက် Lewis ကပိုမိုနေသောခေါင်းစဉ်: အကျိုးကိုနှိုင်းယှဉ်အယူအဆအဘို့သက်သေသာဓက။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2000; 114: 353-363 ။ [PubMed]
Grigson PS, Hajnal အေပြီးတာနဲ့လွန်းဖြစ်ပါသည်: တစ်ခုတည်း saccharin-မော်ဖင်းအကိုက်တွဲဖက်မှုကအောက်ပါ accumbens dopamine အတွက်အေးစက်အပြောင်းအလဲများကို။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2007; 121: 1234-1242 ။ [PubMed]
Grigson PS, Lyuboslavsky P ကို, အ gustatory thalamus ၏ Tanase ဃအပြန်အလှန်တွေ့ရှိရပါသည်ကြွက်များတွင် LiCl-သွေးဆောင်စားသုံးမှုဖိနှိပ်မှု morphine- နှောင့်အယှက်သော်လည်းမ: အအေးစက်အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်အယူအဆဆန့်ကျင်သက်သေသာဓက။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 2000; 858: 327-337 ။ [PubMed]
Grigson PS, Lyuboslavsky PN, Tanase D, Wheeler RA ။ ရေငတ်မှုကြောင့် sucrose စားသုံးမှုကို morphine- LiCl- သွေးဆောင်နှိမ်နင်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ ဇီဝကမ္မဗေဒ & အပြုအမူ။ 1999; 67: 277-286 ။ [PubMed]
Grigson PS, ကြိုး RC ။ saccharin စားသုံးမှု၏ကင်း-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှု: သဘာဝအလျောက်ဆုလာဘ်၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်တန်ဖိုး၏တစ်ဦးကမော်ဒယ်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2002; 116: 321-333 ။ [PubMed]
Grigson PS, ကြိုး RC, Freet CS, ဝီ RA, Geddes RI က။ conditional လှုံ့ဆော်မှုစားသုံးမှု၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ဖိနှိပ်မှု: ဆုကြေး, မနှစ်သက်မှုနှင့်စွဲလမ်း။ Reilly က S, Schachtman T က, အယ်ဒီတာများ in: ။ အေးစက်အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်: အပြုအမူနှင့်အာရုံကြောလုပ်ငန်းစဉ်များ။ နယူးယောက်: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 2008 ။ စစ။ 74-90 ။
Grigson PS, ဝီ RA, ဝီ DS, Ballard သည် SM ။ နာတာရှည်မော်ဖင်းအကိုက်ကုသမှု Sprague-Dawley ကြွက်များတွင် saccharin စားသုံးမှုရက်နေ့တွင်, ဖိနှိပ် sucrose နှင့်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုများ, ဒါပေမယ့်မရ lithium chloride တို့ ပို. ။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2001; 115: 403-416 ။ [PubMed]
မိုးသီး CN, Hiroi N ကို, Nestler EJ, Kosten က TA ။ ကိုကင်းဖို့ differential အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု Lewis ကအတွက် mesolimbic dopamine ပရိုတိန်း၏ဒိုင်းနမစ်နှင့် Fischer 344 ကြွက်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ synapses ။ 2001; 41: 179-190 ။ [PubMed]
Hiroi N ကို, Graybiel လေး။ Atypical နှင့်ပုံမှန် neuroleptic ကုသသည့် striatum အတွက်ကူးယူအချက်စကားရပ်၏ကွဲပြားအစီအစဉ်များကိုသွေးဆောင်။ နှိုင်းယှဉ် Neurology ၏ဂျာနယ်။ 1996; 374: 70-83 ။ [PubMed]
Hiroi N ကို, Marek GJ, Brown က JR, သငျတို့သ H ကို, Saudou က F, Vaidya VA သို့, et al ။ နာတာရှည် electroconvulsive သိမ်းယူမှု၏, မော်လီကျူးဆယ်လူလာများနှင့်အမူအကျင့်လုပ်ရပ်များအတွက် fosB ဗီဇ၏မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1998; 18: 6952-6962 ။ [PubMed]
B က, Kosofsky B, Hyman SE, Nestler EJ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်နှင့်နာတာရှည်ကင်းအားဖြင့်ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် binding က AP-1 ၏စည်းမျဉ်း။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 1992; 89: 5764-5768 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
BT, Nye သူ, Kelz ကို MB, ကိုယ်ပိုင် DW, Iadarola MJ, Nakabeppu Y ကို, et al မျှော်လင့်ပါတယ်။ နာတာရှည်ကိုကင်းနှင့်အခြားနာတာရှည်ကုသမှုအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာပြောင်းလဲ Fos တူသောပရိုတိန်း၏ရေးစပ်ရှည်-တည်မြဲ AP-1 ရှုပ်ထွေးသော၏ induction ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1994; 13: 1235-1244 ။ [PubMed]
ဂျုံးစ်က S, Casswell S က, Zhang က JF ။ အဆိုပါအရက်-related ပျက်ကွက်၏စီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်နှင့်နယူးဇီလန်၏ပြုပြင်သောလူဦးရေအကြားတွင်လျှော့ချကုန်ထုတ်။ စွဲလမ်း။ 1995; 90: 1455-1461 ။ [PubMed]
Kelz ကို MB, Chen က J ကို, Carlezon WA, Jr က Whisler K ကို Gilden L ကို, Beckmann လေး, et al ။ ဦးနှောက်ထဲမှာကူးယူအချက် deltaFosB ၏ expression ကိုကင်းမှ sensitivity ကိုထိန်းချုပ်သည်။ သဘာဝ။ 1999; 401: 272-276 ။ [PubMed]
Kelz ကို MB, Nestler EJ ။ DeltaFosB: ရေရှည်အာရုံကြော plasticity အခြေခံတစ်ဦးကမော်လီကျူး switch သည်။ Neurology အတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 2000; 13: 715-720 ။ [PubMed]
Mackey သည့် WB, Keller J ကို, ဗန် der Kooy ဃ Visceral cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်မော်ဖင်းအကိုက်ခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် conditional အရသာဆန္ဒရှိပိတ်ဆို့။ ဆေးဝါးဗေဒဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1986; 24: 71-78 ။ [PubMed]
McClung, CA, Nestler EJ ။ CREB နှင့် DeltaFosB အားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်ကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2003; 6: 1208-1215 ။ [PubMed]
McClung, CA, Ulery PG, Perrotti LI, Zachary V ကို, Berton အို Nestler EJ ။ DeltaFosB: ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေများအတွက်တစ်ဦးကမော်လီကျူး switch သည်။ ဦးနှောက်သုတေသန Molecular ဦးနှောက်သုတေသန။ 2004; 132: 146-154 ။ [PubMed]
Moratalla R ကို, Elibol B, Vallejo M က, Graybiel လေး။ နာတာရှည်ကင်းကုသမှုနှင့်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း striatum အတွက်သွေးဆောင် Fos-ဇွန်ပရိုတိန်း၏စကားရပ်ထဲမှာ Network ကို-Level အပြောင်းအလဲများကို။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1996; 17: 147-156 ။ [PubMed]
Nachman M က, မျ့ဘဲလျ: D, ကြွက်များတွင်က Le Magnen ဂျေအရက်သောက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်: noxious မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏အပြုအမူအကဲဖြတ်။ သိပ္ပံ။ 1970 ဇွန်လ 5; 168: 1244-1246 ။ [PubMed]
Nair P ကို, et al က Black MM, Schuler M က, ကိန်း V ကို, နှင်း, L, Rigney BA, ။ အမြိုးသမီးမြားအလွဲသုံးစားလုပ်ပစ္စည်းဥစ္စာ၏မွေးကင်းစအကြားမူလတန်းစောင့်ရှောက်သူများအတွက်နှောင့်အယှက်အဘို့အအန္တရာယ်အချက်များ။ ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးမှုနှင့်လျစ်လျူရှု။ 1997; 21: 1039-1051 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nakabeppu Y ကို, Fos / Jun ကမှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြောင်း FosB ၏ Nathan ဃတစ်ဦးကသဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုပုံစံ။ cell ။ 1991; 64: 751-759 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ စွဲလမ်းစေပြည်နယ်များ၏မော်လီကျူးအခြေခံ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်။ 1995; 1: 212-220 ။
Nestler EJ ။ စွဲအခြေခံရေရှည် plasticity ၏မော်လီကျူးအခြေခံ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ Reviews ။ 2001a; 2: 119-128 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏မော်လီကျူး neurobiology ။ စွဲအပေါ်အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2001b; 10: 201-217 ။ [PubMed]
Nestler EJ, Aghajanian GK ။ စွဲလမ်း၏မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာအခြေခံ။ သိပ္ပံ။ 1997 အောက်တိုဘာလ 3; 278: 58-63 ။ [PubMed]
Nestler EJ, Barrot M က, ကိုယ်ပိုင် DW ။ DeltaFosB: စွဲများအတွက်တစ်ဦးကစဉ်ဆက်မပြတ်မော်လီကျူး switch သည်။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2001; 98: 11042-11046 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nestler EJ, Kelz ကို MB, Chen ကဂျေ DeltaFosB: ရေရှည်အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့် plasticity ၏မော်လီကျူးဖျန်ဖြေ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1999; 835: 10-17 ။ [PubMed]
Nye သူ, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Kelz ကို MB, Iadarola M က, Nestler EJ ။ အဆိုပါ striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်ကင်းသဖြင့်နာတာရှည် FOS-related ကိုပဲ induction ၏စည်းမျဉ်းများ Pharmacological လေ့လာမှုများ။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဟော်မုန်း၏ဂျာနယ်။ 1995; 275: 1671-1680 ။ [PubMed]
Olausson P ကို, Jentsch JD, Tronson N ကို, Neve RL, Nestler EJ, တေလာ JR ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် DeltaFosB အစားအစာ-အားဖြည့်ဆာပအပြုအမူများနှင့်လှုံ့ဆျောမှုထိန်းညှိ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006; 26: 9196-9204 ။ [PubMed]
ဖာရ-Otano ငါ Mandelzys တစ်ဦးက, မော်ဂန် JI ။ MPTP-Parkinson dopaminergic လမ်းကြောင်းတစ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်-FosB တူသောပရိုတိန်း၏ persistent စကားရပ်ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ ဦးနှောက်သုတေသန: Molecular ဦးနှောက်သုတေသန။ 1998; 53: 41-52 ။ [PubMed]
Perrotti LI, Hadeishi Y ကို, Ulery PG, Barrot M က, Monteggia L ကို, Duman RS, et al ။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ deltaFosB ၏ induction ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004; 24: 10594-10602 ။ [PubMed]
et al Perrotti LI, Weaver RR, Robison B, Renthal W က, ဝင်္ငါ Yazdani S က။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ DeltaFosB သော induction ၏ကွဲပြားပုံစံများ။ synapses ။ 2008; 62: 358-369 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Persico လေး, Schindler CW, O'Hara BF, Brannock MT, Uhl ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ ဦးနှောက်ကူးယူအချက်စကားရပ်: စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးနှင့်ဆေးထိုးစိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ဦးနှောက်သုတေသန: Molecular ဦးနှောက်သုတေသန။ 1993; 20: 91-100 ။ [PubMed]
Reilly က S, Pritchard TC ။ ကြွက်များတွင်တွေ့ရှိရပါသည် thalamus Gustatory: II ကို။ ဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်အရသာအေးစက်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1996; 110: 746-759 ။ [PubMed]
Riley AL, Tuck DL ။ အေးစက်အရသာဆန္ဒရှိ: အဆိပ်၏အမူအကျင့်အညွှန်းကိန်း။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 1985; 443: 272-292 ။ [PubMed]
မြင့်တက် fo, Boyce JM ။ အေးစက် tastant နှင့် DBA / 2J ကြွက်တွေမှာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှ conditional အရသာရှောင်ရှားခြင်း၏ဝယ်ယူ။ Psychopharmacology (ဘာလင်) 2002; 160: 225-232 ။ [PubMed]
Santolaria-ဖာနန်ဒက်ဇ FJ, ဂိုမက်ဇ-Sirvent JL, et al Gonzalez-Reimers အီး, Batista-လိုပက်ဇ်ဖြစ်မှု, Jorge-ဟာနန်ဒက်ဇ်ဂျာ Rodriguez-Moreno F ကို။ မူးယစ်ဆေးစွဲ၏အာဟာရအကဲဖြတ်။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မူတည်။ 1995; 38: 11-18 ။ [PubMed]
Scalera, G, Grigson PS, Norgren R. Gustatory functions များ, ဆိုဒီယမ်အစာစားချင်စိတ်များနှင့် conditional အရသာခြင်းကိုမနှစ်သက်သည့် thalamic အရသာဧရိယာ၏ excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ရှင်သန်။ အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1997; 111: 633-645 ။ [PubMed]
Schroy PL ။ ကိုကင်းမှတုန့်ပြန်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်အကျိုးကိုနှိုင်းယှဉ်ပါရာဒိုင်းသဘာဝဆုလာဘ်အထောက်အကူပြုကြောင်းအချက်များ။ အဆိုပါ Pennsylvania ပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, Hershey: 2006 ။
Schroy PL, ဝီ RA, Davidson က C, Scalera, G, ကြိုး RC, Grigson ဆာ။ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင်အချိန်ကျော်ဆုလာဘ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် gustatory thalamus ၏အခန်းက္ပ။ ဇီဝကမ္မဗေဒစည်းမျဉ်း, Integrated နှင့်နှိုင်းယှဉ်ဇီဝကမ္မဗေဒ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2005; 288: R966-R980 ။ [PubMed]
Sheng က M, Greenberg ME ။ က c-fos နှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်ရှိအခြားချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အ function ကို။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1990; 4: 477-485 ။ [PubMed]
Tordoff MG, Bachmanov AA ကို။ mouse အရသာ preference ကိုစမ်းသပ်မှုများ: အဘယ်ကြောင့်နှစ်ခုသာပုလင်း? ဓာတု Sense ။ 2003; 28: 315-324 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကြိုး RC ။ သဘာဝကဆုလာဘ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏အင်္ဂါရပ်များရန်၎င်း၏ဆက်စပ်မှု၏မူးယစ်ဆေးသွေးဆောင်တန်ဖိုးတစ်ခုဝတ္ထုကြွက်မော်ဒယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို။ အဆိုပါ Pennsylvania ပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, Hershey: 2007 ။
ကြိုး RC, Hajnal တစ်ဦး, ဟန် L ကို, ဘရူနို K ကိုဟက် EJ, Grigson ဆာ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၏တွေ့ရှိရပါသည်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အစာစားချင်စိတ်ကိုနှိုးဆွသက်ရောက်မှုရှိသော်လည်းအားလပ်ချိန်မှာဆုလာဘ်နှိုင်းယှဉ်နှောင့်အယှက်။ နှိုင်းယှဉ်စိတ်ပညာ၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်။ 2005; 18: 372-396 ။
Weber Eh ။ der Tastsinn und Das Gemeingefuhl ။ ခုနှစ်တွင်: Wagner R ကို, အယ်ဒီတာ။ Handworterbuch der ဇီဝကမ္မဗေဒ [Handworterbuch ဇီဝြဖစ်စဉ်] Vol ။3။ Braunschweig, ဂျာမနီ: Vieweg; 1846 ။ စစ။ 481-588.pp ။ 709-728 ။
Werme M က, Messer ကို C, Olson L ကို, Gilden L ကို, Thoren P ကို, Nestler EJ, et al ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ဘီးပြေးထိန်းညှိ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2002; 22: 8133-8138 ။ [PubMed]
ယန်းဂျေ, ပညာသည် RM, Tratner ငါ Verma ထားတဲ့ IM ။ FosB တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာ spliced ​​ပုံစံ Fos ပရိုတိန်းများကမှတ်တမ်း activation နှင့်အသွင်ပြောင်းတဲ့အနုတ်လက္ခဏာထိန်းညှိသည်။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 1991; 88: 5077-5081 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Zachary V ကို, Bolanos, CA, Selley DE, Theobald: D, Cassidy အမတ်, Kelz ကို MB, et al ။ မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB များအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2006; 9: 205-211 ။ [PubMed]